ရှန်ဒေါင်း Zhongbaokang ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Add Huantai ခရိုင်, Zibo ရှန်ဒေါင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရောက်ရှိဖို့ & Development, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်း
အဓိကစျေးကွက် တရုတ်, အာရှ, Euorope, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, Nortd အမေရိက, Soutd အမေရိက, အာဖရိက, Austrilia
နှစ်စဉ်ရောင်းအား သန်း 200
ကျနော်တို့ဘဝလုံခြုံမှုကိုအာရုံစိုက်နှင့်ကုမ္ပဏီ created ကတည်းကသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ထားခြင်းနေကြသည်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ 20 ကျော်တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင် 60 ကျော်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ အားကြီးသောနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. ကျနော်တို့အင်ဂျင်နီယာနှင့်ရှန်ဒေါင်း၏သွေးသွင်းခြင်းစက်ပစ္စည်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနစင်တာကို Post-ဆရာဝန်သိပ္ပံ Workstation နှင့်သိပ္ပံ၏တရုတ်အကယ်ဒမီပညာရှင် Workstation နှင့်ရှန်ဒေါင်း၏သွေးဗိုင်းရပ်စ် Inactivation နည်းပညာသုတေသနအင်ဂျင်နီယာဓာတ်ခွဲခန်းဆောက်လော့။
အရည်အသွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အသက်ပေတည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအတွက် GMP စံများနှင့်အညီ 10000 အဆင့်သန့်စင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ထက်ပိုမို 40,000 m2 ၏ဧရိယာကိုဖုံးနှင့် ISO 9001 လွန်ပြီ, က ISO 14001, အီး, GMP ။ အရည်အသွေးအသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ငါတို့သည်လည်းကြီးမားသောပိုးသတ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားဇီဝဗေဒ, ဓာတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒအခန်းထဲမှာအပါအဝင်တစ်ဦးခိုင်ရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်စနစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်တင်းကျပ်သော QC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ရှန်ဒေါင်း Zhongbaokang ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်မှု Co. , Ltd မှ။ ဆက်သွယ်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သွေးသွင်းကိရိယာပြုတ်ရည် devices များနှင့်သက်ဆိုင်ရာလယ်ရောင်းအားအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Zhongbaokang မှကြိုဆိုပါ၏!